Vilanova: Dhib kama taagna booska uu ciyaarayo Messi. - Caasimada Online
Home Warar Vilanova: Dhib kama taagna booska uu ciyaarayo Messi.
Vilanova: Dhib kama taagna booska uu ciyaarayo Messi.
Tababaraha kooxda Barcelona Tito Vilanova ayaa qaboojiyey booska uu ku macaamiloon doono ninka ay kooxdiisu ku duuasho ee Lionel Messi, marka ay caawa ka hor yimaadaan kooxda ay xafiiltamaan ee Real Madrid, kulanka loogu magac daray El Clasico.
Ninka reer Argentina ayaan boosna looga cayimin Blaugrana, laakiin waxaa maanka lagu hayaa inuu cayaarayo booskiisa weerarka, iyadoo kooxda difaacaneysa koobka ay diyaarsanayaan inay shabaakad daafac oo celisa u dhigaan ninka jooga gaaban.
“Dhibaato kama taagna halka uu cayaarayo [Lionel] Messi,” ayuu Vilanova ku sharaxay shirkiisa Jaraa’id. “Madrid wey ogaan doontaa sida aan u ciyaareyno.”
El Clasico ayaa caawa bilaaban doonta xiliga geeska Africa marka ay saacxadu ku began tahay 8:50 PM [Laba Saac iyo Konton Daqiiqo].